site တော့ မဟုတ်ဘူး... link ကလေးတွေပါ ...
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Websites Sharing » site တော့ မဟုတ်ဘူး... link ကလေးတွေပါ ...
1 site တော့ မဟုတ်ဘူး... link ကလေးတွေပါ ... on 29th May 2009, 2:20 am
ကိုယ့် ကွန်ပျုတာ ရဲ့  screen ကလေးများ သန့်ရှင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ... ဒီအောက်က link ကလေးကို နှိပ်လိုက်နော်... အဲဒီမယ် အမှန်အကန် သန့်စင်ပေးလိမ့်မယ် ....
ငှက်တစ်ကောင် အသည်းကွဲတဲ့ ပုံစံလေးပါဗျာ .. ကြည့်ကြည့်နော်..
သီချင်းအေးအေးကလေး ပါ စာသားလေးတွေက အောက်ကပေါ်လာတာဆိုတော့ စိတ်ဝင်တစားလိုက်ဆိုလို့ ကောင်းတာပေါ့.
ဒီအောက်က link ကလေးကနေပြီးတော့ ကြည့်လိုက်နော်...
ကောင်လေးက ကောင်မလေးကို ရည်းစားစကားပြောတာလေ .. အဲဒီအောက်က link မှာပါ ..
အားလုံးသိပြီးသားတွေလဲ ပါ မှာပါ .. အဲဒီလို မျိုး link ကလေးတွေရှိရင်လည်း ပေးသွားကြဦးနော် ... တခြားလူတွေလဲ
ကြည့် ပြီးတော့ ကြည်နူးရအောင်ပေါ့ ... ပျော်စရာကလေး တစ်ခု အဖြစ်ပေါ့ ဗျာ .....
2 Re: site တော့ မဟုတ်ဘူး... link ကလေးတွေပါ ... on 29th May 2009, 11:06 am
Window Media Player နဲ့ MP3 သီချင်းနားထောင်ရင်း....သီချင်းစာသားမြင်ချင်ရင် ဒီနည်းလေး သုံးကြည့်ပါ ခင်ဗျာ
အသုံးဝင်ချင်မှလည်းဝင်ပါမယ့် .........ဒါပေမဲ့ နည်းပညာတစ်မျိုးလို့ပဲ မှတ်ယူပေးပါ
သီချင်းစာသားက ကိုယ်နားထောင်မည့် သီချင်းဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် ၊ ဒါမှ သီချင်းနားထောင်ရင်း စာသားကို ကြည့်လို့ရမှာပါ
၁။ အရင်ဆုံး မိမိ နားထောင်မည့် သီချင်းတစ်ပုဒ်ရဲ့ စာသားကို Accessories ရဲ့ WordPad ထဲမှာ အရင်ရိုက်ထည့်ရပါမယ်၊(Font ကတော့ Zawgyi font နော်) သီချင်းစာသားအားလုံးရိုက်ပြီးသွားရင် ခဏထားလိုက်ပါ ပြီးမှ copy ကူးရမှာမို့။
၂။ Window Media Player မှ ကိုယ်နားထောင်မည့် သီချင်းကို ဖွင့်ပါ။
၃။ ပြီးရင် Media Library ကို ကလစ် လုပ်ပြီး အဲ့ဒီမှာ ကိုယ်နားထောင်မည့် သီချင်းရဲ့ အမည်ပေါ်မှာ Right Click လုပ်ပါ။
၄။ Right Click လုပ်ပြီးရင် Advanced Tag Editor ကို ကလစ်ပါ၊ အဲ့ဒီထဲမှာ Lyrics ကိုတွေ့ရင် ကလစ်လုပ်လိုက်ပါ။
၅။ Lyrics Box ထဲမှာရှိတဲ့ Add ကို ကလစ်လုပ်လိုက်ပါက ဘေးမှာ box တစ်ခုပေါ်လာပါမည်။
၆။ ပေါ်လာတဲ့ အခါ Text ဆိုတဲ့ ဘေးဘောင်ထဲမှာ ရိုက်ထားတဲ့ သီချင်းကို Copy ကူးပြီး Paste ချလိုက်ပါ၊
အားလုံးပြီးရင်တော့ OK ပါပဲ၊ သီချင်းပြန်နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါ ၊ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့စက်တွေက စာသားမပေါ်ဘူး ၊အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ Subtitles ပြောင်းရမယ်လေ၊
၇။ အဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်က သီချင်းနားထောင်တဲ့အခါ ကိုယ် Paste ချထားပေမဲ့ စာသားမပေါ်တာတွေရှိမယ် ၊အဲ့ဒါဆိုရင် တော့ Play menu ကို Click လုပ်ပါ ၊ ပြီးရင် Caption and Subtitles ထဲက on if Available ကို ပြန်ရွေးချယ်လိုက်ရင် ရပါပြီ။
Last edited by bluerays on 29th May 2009, 5:58 pm; edited 1 time in total (Reason for editing : လင့်ပြင်လိုက်သည်)
3 Re: site တော့ မဟုတ်ဘူး... link ကလေးတွေပါ ... on 29th May 2009, 5:56 pm
ကို ET ခင်ဗျာ..လင့်ပေးရင်လင့်အတိုင်းဘဲပေးပါခင်ဗျာ..ဖိုရမ်စည်းကမ်းမှာပါပါတယ်ခင်ဗျာ
4 Re: site တော့ မဟုတ်ဘူး... link ကလေးတွေပါ ... on 29th May 2009, 6:38 pm
ကျနော်တင်ထားတာ ဘယ်လို မှားနေလို့လဲ မသိဘူး
တင်ထားတာ ပို့စ်နေရာမှားရင် မှားမယ်
ကျနေ်ာတင်ခဲ့တာက ဒီနမူလေးသီချင်းကို ပေးတာပါ
လင့် ကို ပေးတာ မဟုတ်ပါဘူး
5 Re: site တော့ မဟုတ်ဘူး... link ကလေးတွေပါ ... on 29th May 2009, 6:48 pm
-[url=http://www.mediafire.com/?jyxjmgxjf1s]ဒါကတော့ နမူနာလုပ်ထားတဲ့ သီချင်းပါ[/url]-
ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကအဲဒိလိုမရေးဘဲ link အတိုင်းထည့်ဖို့ပါခင်ဗျာ
6 Re: site တော့ မဟုတ်ဘူး... link ကလေးတွေပါ ... on 29th May 2009, 6:52 pm
ကျနော်တို့ ဖိုရမ်မှာ Member တွေအတွက် အန္တာရာယ် ဖြစ်စရာ Link မျိုးတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရမှာကို ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ HyperLink ဖြုတ်ပြီးတော့ ပိုစ့်တင်စေတာပါ....
အစ်ကိုက Link ပေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမှန်ပါတယ်
အစ်ကိုပေးတဲ့ သီချင်းကို `-[You must be registered and logged in to see this link.]-´ ဆိုပြီးတော့ မရေးစေဘဲ
" [You must be registered and logged in to see this link.] " အဲဒီ့လို ရေးဖို့အတွက်
ကို ET လည်း တခြားဖိုရမ်က Moderator တစ်ဦးဖြစ်တဲ့အတွက် နားလည်ပေးပါလို့.....
7 Re: site တော့ မဟုတ်ဘူး... link ကလေးတွေပါ ... on 29th May 2009, 7:01 pm
ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ ကျနေ်ာ သတိမထားမိလိုက်ဘူး
ကျေးဇူးပါဗျာ ခုလို ရှုင်းပြတာကို
ကျနေ်ာ နောက်တင်ခဲ့ရင် လင့်ပဲ တင်ပေးပါမယ် ကို SYKO ရေ
ကို Blueray ရေ
8 Re: site တော့ မဟုတ်ဘူး... link ကလေးတွေပါ ... on 29th May 2009, 7:03 pm
9 Re: site တော့ မဟုတ်ဘူး... link ကလေးတွေပါ ... on 29th May 2009, 7:12 pm
ကျနော်က မြန်မာကြယ်စင်စုကပါ ကို bluerays ရေ
[You must be registered and logged in to see this link.] မှာပါ
10 Re: site တော့ မဟုတ်ဘူး... link ကလေးတွေပါ ... on 29th May 2009, 7:26 pm
Admin များခင်ဗျာလင့်ခ်အသစ်ကိုဖွင့်လိုက်ရင်ဘားမှာက [You must be registered and logged in to see this link.] လိုဘဲပေါ်နေတယ်ခင်ဗျ..နည်းနည်းလုပ်ပေးပါဦးနော်
11 မိမိရေးထားသောစာများကို Mp3 ပြုလုပ်နည်း on 8th June 2009, 9:50 am
မိမိရေးထားသောစာများကို Mp3 ပြုလုပ်နည်း
မိမိရေးလိုက်သောစာများကို အသံ File (MP3) အဖြင့်နားထောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့အောက်မှာ
ပေးထားတဲ့ Website မှာသွားလုပ်နိူင်ပါတယ်။စာသားများကိုအသံဖြစ်ပြောင်းရာတွင် အသံနှစ်မျိုးပေး
ထားပါတယ်။ မိန်းခလေးအသံနှင့် ယောက်ကျားလေးအသံကြိုက်ရာရွှေးပြီအသံသွင်းနိူိင်ပါတယ်။
၁။ Enter text in English တွင်စာများရိုက်ထည့််ပါ။
၂။ Male Voice တွင်မိန်ခလေးအသံကြိုက်ရင် Female Voice ကိုရွေးပေးပါ။
၃။ Create Mp3 ကိုနှိပ်ပါ။
၄။ Save လုပ်လိုလျှင် Download Mp3 ကိုနှိပ်ပါ။
12 Re: site တော့ မဟုတ်ဘူး... link ကလေးတွေပါ ...